Burmese taste - Iora: ခင်ဆုိုတဲ့ ကိုယ့်အမေ
Posted by Iora at 11:06 AM
San Htun May 10, 2015 at 5:06 PM
မမအိုင်အိုရာ အမေဆီက သင်ယူစရာတွေ အများကြီးပဲ...Happy Mother Day !
Iora May 10, 2015 at 6:01 PM
Happy Mother Day San Htun Lay!!!
ဟုတ်လား။ ဘာတွေလဲ စန်းထွန်းလေး။
စူးနှယျလေး May 11, 2015 at 2:22 AM
မမအိုင်အိုရာရဲ့ အမေက စူးနွယ်မေမေနဲ့ တချို့အချက်တွေတူတယ်။ လှတာ၊ ဖက်ရှင်ကျတာ၊ ကြားရောင်လေးတွေ ကြိုက်တာ၊ ဟင်းချက်ကောင်း၊ ဟင်းစပ်ကောင်း၊ အရမ်းအလုပ်လုပ်၊ အိမ်ထောင်ထိန်းသိမ်းရင်း ရတနာလေးတွေ ရောင်း၊ သစ်ခွကြိုက်၊ နှုတ်ခမ်းနီကြိုက် (လက်သည်းနီလည်းကြိုက်တယ်)
အမေတွေမှာ တူတာလေးတွေတော့ ရှိနေကြတာပဲနော်.. :)
Iora May 11, 2015 at 4:58 PM
အဲဒါကြောင့်များလားမသိဘူးနော် ကုိုယ်နဲ့ စူးနွယ်နဲ့ လည်း ဟင်းတွေကြိုက်တာတူကြတယ်နော်။
အမေတွေက ဟင်းချက်ကောင်းလို့ လေ။
shwenyar tharlay May 16, 2015 at 9:40 AM
ဖတ်ပြီးတာကတော့ နှစ်ရက်သုံးရက်ရှိပြီ အခုမှအေးအေးဆေးဆေးလာမန့်တာ။အစ်မအမေအကြောင်းကိုဖတ်ပြီး
သွားရင်ခွင့်လွတ်ပါလို့ :) ခေတ်မှီတာမမှီတာတွေကွာပေမဲ့သားသမီးတွေအပေါ်ထားတဲ့မေတ္တာစေတနာကတော့
Iora May 17, 2015 at 6:33 PM
အမေအားလုံးကတော့မကုန်ခမ်းနုိုင်တဲ့မေတ္တာကုိုနည်းမျိုးစုံနဲ့ ကုိုယ်တုို့ ကိုကျင်လည်ရာနေရာဒေသအလုိုက်ပေးကြတာအတူတူပါဘဲနော်။
ရွှေညာသားလေးရဲ့ ကွန်မန့် တောင်အရမ်းဖတ်လုို့ ကောင်းနေတာ ပုို့ စ်တစ်ခုအဖြစ်နဲ့ သာရေးရင်ပုိုတောင်ဖတ်လို့ ကောင်းအုန်းမှာ။
ကွန်မန့် လေးအတွက် ဒို့ ကလည်းကျေးဇူးပါလို့ ..
Ma Tint May 27, 2015 at 4:54 AM
အမေများနေ့နဲ့ဆက်နွယ်ပြီ အိုင်အိုရာရဲ့ မေမေ့အကြောင်းအခုမှ ဖတ်ဖြစ်တော့တယ်။ အဲ့ဒီတစ်လောက မျက်လုံးပိုးကောင်ကိုက်ထားလို့ စာကြွေးတွေများသွားတယ်။ ဖတ်ရင်း တီတင့်ရဲ့မေမေ့ကိုသတိယသွားတယ်... တီတင့်တို့မောင်နှမတွေကျပြန်တော့ မာမီနဲ့ဖေဖေလို့ခေါ်ကြတာလေ နောက်မာမီရောက်လာတော့မှ ဒယ်ဒီဖြစ်သွားတာ။
Iora May 30, 2015 at 5:50 AM
တီတင့် စာတွေဖတ်တုန်းကလည်း အုိုင်အိုရာ က အမေနဲ့ ဒက်ဒီကို အရမ်းသတိရတာ။
မီးမီးငယ် May 30, 2015 at 8:29 PM
ဒါပေမဲ့ နှုတ်ခမ်းနီ ရေမွှေးဘာညာ သုံးတုန်းဘဲ ဆုံးတဲ့ထိ။
မီးမီးငယ် June 3, 2015 at 8:35 PM
စံပယ်ချို May 30, 2015 at 9:22 PM